जिता बराल प्रकरण : दुई महिना बितिसक्दा छानविन प्रक्रिया किन अघि बढेन? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
जिता बराल प्रकरण : दुई महिना बितिसक्दा छानविन प्रक्रिया किन अघि बढेन? तीन दिनभित्रै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिवद्धता थियो
सिर्जना खत्री शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, १८:२४:०२
काठमाडौं– नेपाल नर्सिङ संघले जिता बराल घटनाको छानबिन गर्न बनाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
नर्स जिता बरालले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरेको दुव्र्यवहार र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संघले असोज ९ गते तीन सदस्यीय छानविन समिती गठन गरेको थियो।
आफूहरुले घटनाको बारेमा सत्यतथ्य अध्ययन गरिरहेकोले छानविन प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘हामी घटनाको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्दै छौँ। सबै कुरा बुझेर मात्रै निर्णय लिनेछौँ।’
ट्रमा सेन्टरमा जिता बरालले अपशब्दको प्रयोग गरी ड्युटीमा खटिएका डाक्टर र नर्समाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
संघले न्याम्सकी जानकी धामीको संयोजकत्वमा न्याम्सकै राजकुमारी ज्ञवाली र पाटन अस्पतालकी दिलकुमारी थापा सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको हो। छानविन समितिले तीन दिनभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
ट्रमा सेन्टरले नर्सिङ संघलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र लेख्दै उक्त घटनाको विषयमा आवश्यक कारबाही गरी अस्पताललाई समेत जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो।
संघले पत्रकार सम्मेलन गरी संघकी आजीवन सदस्य समेत रहेकी बरालको असामान्य र अमर्यादित गतिविधिबारे छानविन गरी दोषी ठहरिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ।
निषेधाज्ञाका समयमा बिरामीलाई टेलिमेडिसिन सेवा दिँदै नेपाल हेल्थ कर्प्स ३८ मिनेट पहिले
होम आइसोलेसन र मानिसक स्वास्थ्य ५९ मिनेट पहिले